कस्तो रहला मोदीको दोस्रो कार्यकालमा ओलीसँगको सम्बन्ध ? » Nepal Fusion	Nepal Fusion	कस्तो रहला मोदीको दोस्रो कार्यकालमा ओलीसँगको सम्बन्ध ? » Nepal Fusion
कस्तो रहला मोदीको दोस्रो कार्यकालमा ओलीसँगको सम्बन्ध ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा २४ चैत २०७४ मा हैदरावाद हाउसमा भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए, ‘सबका साथ, सबका विकास’ भन्ने आफ्नो नारा र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने ओलीको नारा एकअर्काको परिपूरक छ ।
नेपालबाट समुद्रसम्म पहुँच बढाउने विषयमा पनि ओली र मोदीबीच सहमति भएको थियो । ओलीसँगको भेटपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले भनेका थिए, ‘सगरमाथाको देश अब समुद्रसँग सिधा जोडिने छ ।
लोकान्तर डटकममा पन्तले लेखेका छन् ।